Gudoomiye Cawad oo shir muhiimad gaar leh ku tilmaamay kulanka shannaad ee baarlamanka JFS iyo dowlad-goboleedyada – Kalfadhi
Gudoomiye Cawad oo shir muhiimad gaar leh ku tilmaamay kulanka shannaad ee baarlamanka JFS iyo dowlad-goboleedyada
Gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha Shacabka Mahad Cabdalla Cawad oo maanta Garowe yimi ayaa shir muhiimad weyn leh ku tilmaamay shirka afhayeennada baarlamanka federaalka iyo kuwa dowlad-goboleedyada ee beri ka furamaya Garowe.
Wuxuu sheegay in shirkan ay ahayd inuu dhaco bilawgii sannadka, balse Puntland oo shirka martigelin lahayd ay ku jirtay arrimaha doorashada guud iyo ugu dambayn dhamaystirka dhimsaha laanta fulinta ee dowladda.
Mudane Mahad ayaa sheegay in shirkan looga arrinsan doono macluumaad is-weydaarsiga baarlamaanada iyo sidii looga tashan lahaa tayo kordhinta golayaasha. Wuxuu sheegay in arrimahaas ay yihiin in la isula meel dhigo si wanaagsan inta shirkani socdo.
Wuxuu xusay in sannadkan iyo kan xiga inta badan dowlad-goboleeyadda Jubbaland, Koonfur-galbeed, Hirshabeelle iyo xataa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa u diyaar garoobaya doorashooyin baarlaman iyo kuwa xukuumadeed, sida qorshuhu yahay.
In wax badan la isla meel dhigo ka hor doorashooyinkaas ayuu ku sheegay gudoomiyuhu in ay tahay arrin muhiim ah.
Afhayeennada golayaasha barlamanka ee dalka ayaa isugu yimi Garowe, waxaana beri halkaas uga furmi doona shirkoodii shannaad ee ay yeelanayaan.
Reysal Wasaare Kheyre oo Xildhibaanno hor leh u magacaabay Wasiiro
Hanaanka Dhaqaalaha Soomaaliya oo ay maanta qiimeyn uga bilaabatay Mareykanka